अग्निविरूद्ध कांग्रेसले किन दिएन उम्मेदवारी? :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, माघ ७
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा लेखे- राजनीतिमा अनेक पात्र र प्रवृत्ति हुन्छन्। कुन पदमा कस्तो प्रवृत्ति? छनौट उचित भएन भने त्यो पदको गरिमा त धरापमा पर्छ नै। राजनीतिप्रतिनै थप वितृष्णा बढ्छ। श्री पशुपतिनाथले बहुमतधारी नेकपालाई सद्बुद्धि प्रदान गरून्।
सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सापकोटा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २२ मा सुनुवाइ गर्दैछ।
प्रवक्ता शर्माले त्यही कुरालाई संकेत गर्दै सापकोटा सभामुख हुन नहुने संकेत गरेका थिए।
‘दल या सरकारको नेतृत्वभन्दा संसदको नेतृत्व फरक गरिमा, सालिनता र सन्तुलनको संस्कारगत छविसमेत अनुभूति हुनुपर्ने जिम्मेवारी हो,’ शर्माको प्रश्न थियो, ‘सत्यनिरूपणको टेबुलमा थियो त अलग कुरा अन्यथा अदालतमा विचारधीन मुद्दामा के उन्मुक्ति दिने अधिकार राख्ने थलो हुन् राजनीतिक दल या संसद?’
सोमबारसम्म पनि कांग्रेसले हारिने भए पनि सभामुखमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएको थियो। सचेतक पुष्पा भुषाललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि सापकोटाको मुद्दाबारे टीकाटिप्पणी जारी थिए।
आफूनिकट सापकोटालाई सभामुख बनाउन महिना दिनसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रस्साकस्सी गरेका प्रचण्ड सापकोटालाई सर्वसम्मत बनाउन चाहन्थे। उनी बहुमतले सभामुख त भइ नै हाल्थे तर सर्वसम्मत भएपछि जाने सन्देश फरक हुन्थ्यो।
सापकोटालाई सर्वसम्मत बनाउन प्रचण्डले सक्रियता बढाए।
सोमबार बेलुका प्रचण्डले देउवालाई टेलिफोन गरे।
प्रचण्ड र देउवाबीच हिजोआज नियमितजसो कुराकानी गर्छन्।
सोमबार साँझ प्रचण्डले भने- अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा समर्थन गरिदिनुपर्‍यो।
‘सभापतिजी र प्रचण्डबीच ‘बाक्लो कुराकानी’ हुन थालेको धेरै समय नै भइसक्यो। प्रचण्डले सभापतिसँग सापकोटालाई सभामुखमा सर्वसम्मत बनाउनुपर्‍यो, बरू उपसभामुख कांग्रेसलाई छाड्न म प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो,’ देउवानिकट एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
मंगलबार बिहान प्रचण्डले कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाए।
प्रचण्ड र पौडेलबीच खुमलटारमा कुराकानी भइरहेका बेला सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेको थियो। उक्त बैठक सभामुखमा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने/नदिने विषयमा छलफल भइरहेको थियो।
पौडेलको सचिवालयले प्रचण्ड-पौडेल भेटवार्ता भएको बताए पनि भेटमा के कुराकानी भएको भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन।
पौडेलसँग प्रचण्डले आफूहरू कांग्रेसलाई उपसभामुख छाड्न सकरात्मक रहेको बताएको स्रोतको दाबी छ।
पौडेलका सहयोगी चिरञ्जिवी अधिकारीले प्रचण्ड-पौडेलबीच अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भएको बताए।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले बरिष्ठ नेतासँग पहिलेदेखि नै भेट्न खोजिरहनुभएको थियो। उहाँ (पौडेल) उपचारका लागि हालै नयाँ दिल्ली जानुभएकोले भेटघाटको समय मिलिरहेको थिएन। आज समय मिलाएर कुराकानी भएको हो। यो औपचारिक कुराकानी थिएन,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
पौडेलसँग प्रचण्डको कुराकानी भएको केहीबेरमा सकिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्‍यो।
‘प्रचण्डजीले सभापति र बरिष्ठ नेतालाई नै उपसभामुख छाड्न सकिने बताउनुभएको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू छानबिन समितिमा पनि सत्ता-प्रतिपक्ष सहमतिमै एक-एक आयोगको नेतृत्व लिएको हो।’
ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार देउवा र प्रचण्डबीच अचेल नियमित कुराकानी हुनुले पनि सहमति र सहकार्यअनुसार सत्ता-प्रतिपक्षी अघि बढ्न चाहेको देखाउँछ।
नेकपा सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि उनीविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ।
‘व्यक्ति हत्याका आरोपी सापकोटालाई गरिमामय संसदको सम्माननीय सभामुख पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित गर्न दिनुहुन्न भनेर हामीले पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने भनिरहेकै थियौं,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर सभापतिजी र प्रचण्डबीच कुराकानी भएछ। यसै पनि संसदमा नेकपाको बहुमत छँदैछ त्यसैले उम्मेदवारी दिइरहनुको अर्थ पनि भएन। विरोधका लागि विरोधजस्तो मात्रै हुने देखियो।’
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा सभामुख निर्वाचन बेला सत्ता-प्रतिपक्ष मतभेद नहोस् भनेरै पार्टीले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको बताए।
‘संसदीय दलको कार्यसमितिले सभामुखमा उम्मेदवार नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखको पद निष्पक्ष, तटस्थ, स्वीकार्य र साझा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’
सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि पार्टी सदस्यता पनि त्यागेको हुनुपर्छ।
सभामुखले प्रतिपक्षलाई झन् बढी महत्व दिनुपर्ने भएकोले अहिले चिढ्याउन नखोजेको संकेत खाँणले गरेका छन्।
‘प्रतिपक्षलाई महत्व दिनुपर्ने सभामुख भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘जो सभामुख बने पनि नियुक्तिका बेला मतभेद र पक्ष-विपक्ष हुन नदिने भनेर स्वतन्त्र होस् भनेरै उम्मेदवारी नदिएको हो।’
कांग्रेसले उपसभामुख पदका लागि सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको हो? भन्ने प्रश्नमा खाँणले एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने संविधानको प्रावधानअनुसार नेकपाले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख गरे।
‘सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिइसक्यो उसले अब उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘उपसभामुखबारे छलफल हुँदै जाला। समय पनि छ। तर नेकपाले संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसलाई उपसभामुख दिनुपर्छ। यसले वातावरणलाई सर्वस्वीकार्य र सहमति तथा सहकार्यको राजनीतिलाई पनि नेकपाले स्वीकार गरेको देखिन्छ।’
उनले सभापति देउवासँग प्रचण्डको फोन र भेटघाट भइरहने पनि उल्लेख गरे। ‘भेटघाट र फोन त भइरहन्छन् नै,’ खाँणले भने, ‘मुख्यकुरा सदनका चार दलमध्ये नेकपापछि कांग्रेस ठूलो दल हो। प्रमुख प्रतिपक्षी पनि हो। उपसभामुख दिँदा राम्रै हुन्छ।’